LUXURIOUS 50 SPF Sun care क्रिम नेपाली बजारमा « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७६, २२ माघ बुधबार १५:०२ मा प्रकाशित
Tru Derma SA Pvt. Ltd. ले LUXURIOUS 50 SPF Sun care क्रिम बजारमा ल्याएको छ । कुन इन्ग्रिडियन्टले छालालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, UV and UVB लाई कति वेभ लेन्थसम्म सुरक्षा दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यो सन केयर क्रिमले ३७४ सम्मको वेभ लेन्थलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ जुन विश्वकै अहिलेसम्मको उच्च हो । यो क्रिमले घामबाट ह्ुनसक्ने छालाको क्यान्सरबाट केही हदसम्म जोगाउने अमेरिकन स्किन क्यान्सर फाउन्डेसनले सिफारिस गरेको छ ।
LUXURIOUS 50 SPF Sun care ले सुर्यकोUV, UVB किरणबाट लामो समयसम्म सुरक्षा दिने र यो सन ब्लकमा टिनो सर्भ एस भएकाले 8 hour water resistent गर्छ र घामबाट दिने सुरक्षाको समय बढाउँछ । यो क्रिम दिनमा २ पटक प्रयोग गरेमा घामबाट पूर्ण रुपमा सुरक्षा पाइन्छ । यो Hypoallergenic र हरेक प्रकारका छालामा सुरक्षित मानिन्छ ।
कतिपयले घर भित्र बस्दा सन केयर क्रिम लगाउनुपर्दैन भन्ने ठान्छन् तर यो भ्रम हो । घरभित्र बालिने एलइडी लाइटको प्रकाशले पनि सूर्यको जस्तै युभि र यूभिवी फाल्ने भएकाले छालालाई असर पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले त्यसैले घरमा बस्दा पनि विहान र बेलुका सन ब्लक क्रिम लगाउन आवश्यक भएको Tru Derma SA Pvt. Ltd. का प्रबन्ध निर्देशक सुशान्त मुरारकाले जानकारी गराउनुभयो । यसले8 hour water resistant गर्छ । LUXURIOUS 50 SPF Sun care अमेरिकी प्रविधिबाट उत्पादन भएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त Brand हो । यसका साथै यो डर्माटोलोजिष्टहरुबाट परीक्षण भएर बजारमा आएकाले धेरै डाक्टरहरुले सिफारिस गर्ने Brand को रुपमा परिचित छ ।